1 - 2019 - Vernac News
Uzakuhlala ngendlu iminyaka emithathu uBonginkosi Khanyile #FeesMustFall
By Sakhikhaya Dlala on Jan 28, 2019 • ( Leave a comment )
EKapa – Itshantiliziyo le #FeesMustFall uBonginkosi Khanyile ugwetywe iminyaka emithathu ehlala ngendlu okanye isohlwayo samawaka amahlanu (R5000) esixhonywe iminyaka emihlanu. Elitshantliziyo belijongene nezityholo zokuqhwaya udushe esidlangalaleni nokutyeshela imiyalelo yabakwantsasana ngexesha loqhankqalazo lwephulo lwemfundo […]
By Vernac News on Jan 27, 2019 • ( Leave a comment )
Bonginkosi Khanyile It was Amílcar Cabral who correctly suggested to us that at all times we must expose lies whenever put before us. Nothing is worth hiding from the masses of our […]
Mbe Mbhele “Without new visions we don’t know what to build, only what to knock down. We not only end up confused, rudderless and cynical, but we forget that making a revolution […]
By Sakhikhaya Dlala on Jan 24, 2019 • ( Leave a comment )
EKapa – Abafundi beYunivesithi yaseNtshona basola ifuthe lepolitiki njengonobangela wokubanjwa kuka Aseza Mayaphi (20) emva kokubhaqwa enxibe impahla yangentla yomkhosi wokhuselo weli. Aba bafundi bakutsho oku xa bebeyokuxhasa u-Aseza Mayaphi, owenza izifundo […]
By Vernac News on Jan 24, 2019 • ( Leave a comment )
EKapa – Umfundi weYunivesithi yaseNtshona Koloni (UWC) u-Aseza Mayaphi uzakuvela phambi kweNkundla kaMantyi eBellville ngalentsasa emva kokubanjelwa ukunxiba impahla yomkhosi wokhuselo weli. Lomfundi uvele kumabonakude enxibe iimpahla ze-SANDF ngexesha esenza udliwano-ndlebe nejelo […]